Nairobi: Shirka Wadatashiga Somalia
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay ee siyaasadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay inuu dhacay kulan ku saabsan Somalia.
Sida lagu sheegay war saxaafadeedka, guddigaasi waxaa ku jira wakiillo ka socda dawladda federaalka ku meelgaadhka ah, baarlamaanka federaalka ku meelgaadhka ah, dawladaha maamullada Puntland iyo Galmudug, Midowga Afrika IGAD, iyo Qaramada Midoobay oo mas’uul ka ah qabanqaabada hawsha shirka qaran.
War saxaafadeedku waxa uu sheegay in ujeeddada ugu weyn ee shirka wadatashiga ay tahay horumarinta hannaanka nabadda, iyadoo laga duulayo shirkii sare ee wadatashiga ahaa ee bishii Apriil ka dhacay magaalada Nayroobi ee uu martigeliyey ergayga gaarka ah ee xogyaha guud ee Soomaaliya Dr Augustine P. Mahiga iyo Cahdigii Kampala iyo in la isla dejiyo tub lagu soo af-meero xilliga kala-guurka ah.
Xafiiska Qaramada Midoobay waxa uu sheegay in guddiga qabanqaabada ay ka shaqayn doonaan in shirka wadatahsiga uu noqdo mid loo wada dhan yahay intii suurtogal ah. Ka sokow dawladda, baarlamaanka, Puntland iyo Galmudug waxaa jiri doona wakiillo matalaya ururka Alu Sunna Wal-Jamaaca iyo qaybaha kale ee bulshada ee ay arrintu khusayso.
Shirkaasi waxa uu ku heshiin doonaa tubta la marayo iyo qorshe fulineed muujinaya shaqooyinka ay tahay in la qabto lana dhammaystiro bilaha soo socda.
Shaqooyinkaasi waxaa ka mid ah in dib u habayn lagu sameeyo hay’adaha dawliga ah ee ku meelgaadhka ah, dhammaystirka iyo ansixinta dastuurka cusub, soo celinta amniga iyo dhismaha hay’adihii amniga, in qaybaha iyo dadka la gaadho lana sameeyo dib u heshiisiin, lana fuliyo adeegyadii ijtimaaciga ah, sii hagaajinta xisaabtanka iyo diyaarinta afti loo qaado dastuurka iyo doorashooyin qaran.
Go’aanka kama dambaysta ah ee laga gaadho goobta shirkaasi wadatashiga ah lagu qabanayo, taariikhda iyo tirada dadka kasoo qaybgalaysa waxaa lagu salayn doonaa qiimaynta dhinaca amniga ee hadda la samaynayo, sida war saxaafadeedkaasi sheegayo.
Guddiga qabanqaabada waxaa ka go’an in shirkan uu noqdo mid ay Soomaalidu leedahay.